Mpanoratra nandray tsindrimandry tamin'ny fomba hafa
" Fa tsy nisy faminaniana avy tamin'ny sitrapon'ny olona tany aloha rehetra ; fa avy tamin'Andriamanitra no nitenenan'ny olona araka izay nitondran'ny Fanahy Masina azy. "2 Pet. 1:21
Koa satria olona samy hafa (ao amin'ny Baiboly) no nanambara azy dia amin'ny endriny samy hafa no isehoan'ny fahamarinana. Misy lafiny iray amin'ilay lohahevitra manaitra mafy kokoa ny mpanoratra iray ; izay mifanaraka amin'ny fanandramany na ny fahatakarany sy ny fitiavany no raisiny ; ny sasany mifantoka amin'ny lafiny iray hafa ; ary samy eo ambany fitarihan'ny Fanahy Masina izy ireo no maneho izay tena napetraka tao an-tsainy indrindra - fahamarinana amin'ny endriny samy hafa raha jerena tsirairay, saingy mirindra tanteraka izy manontolo. Ary ireo fahamarinana voambara araka izany dia mikambana ho fitambarana iray lavorary, mifanaraka amin'izay ilain'ny olombelona amin'ny fotoana rehetra sy amin'ny fanandramana eo amin'ny fiainana.
Nahafaly an'Andriamanitra ny nampita ny fahamarinany tamin'izao tontolo izao tamin'ny alalan'ny fahefan'olombelona, ary ny Tenany mihitsy, tamin'ny alalan'ny Fanahiny Masina, no nanome fahefana ny olombelona sy nahatonga azy ireo ho afaka hanao io asa io. Izy no nitarika ny saina hisafidy izay holazaina sy hosoratana. Nankinina tamin'ny fitaovana avy eto an-tany ilay harena, kanefa dia avy any an-danitra ihany izany na ahoana na ahoana.
Nampitaina tamin'ny alalan'ny fitenin'olombelona tsy tanteraka ilay fanambarana, kanefa fanambaran'Andriamanitra izany ; ary izay zanak'Andriamanitra mpankato sy mino dia mahita ny voninahitry ny herin'Andriamanitra, feno fahasoavana sy fahamarinana, ao anatiny. Ao amin'ny Teniny dia nomen'Andriamanitra ny olombelona ny fahalalana ilaina amin'ny famonjena. Tokony hekena ho fanambarana ny sitrapony (sitrapon'Andriamanitra), manana fahefana sy azo antoka tanteraka ny Soratra Masina. Izy (ny Soratra Masina) no filamatra amin'ny toetra tokony hananana, mpanambara fampianarana, ary fizahan-toetra ny fanandramana lalovana. " Izay soratra rehetra nomen’ny tsindrimandrin’Andriamanitra dia mahasoa koa ho fampianarana, ho fandresen-dahatra, ho fanitsiana izay diso, ho fitaizana amin’ny fahamarinana, mba ho tanteraka ny olon'Andriamanitra, ho vonona tsara ho amin'ny asa tsara rehetra. " - 2 Tim. 3:16,17.